Talooyin Ku Socda Ardayda Dhammeysay Jaamacadaha? |
Waa Maxay Cilmiga Sayniska?
Leylo Maxamuud, March 30, 2017
Bulsho Wada Munaafaqowday !!
Aqoon GuudArrimaha Qoyska & Horumarinta Bulshada
Ilhaan Ciise Maxamed — July 10, 2019
Dalkeenna Soomaaliya waxaa sanad waliba qalin-bedesha oo jaamacadaha kabaxa kumanaan arday, waxa eyna ku soo dhacaan wadada xaqiiqda ah taas oo ah in cidna eysan saacideynin si’ey uhelaan shaqooyinka ey ubbaahanyihiin.
Waxaana jira caqabado badan oo saameyn kuleh in uu qofki helin shaqadii uu ubbaahnaa ha’ahaato mid katimaada shaqooyinka dalka kajira oo yar, ama Qabiil in shaqaalaha lagu qaato ama shaqooyinkii dhallinyarada loogu talagalay in ey kashaqeeyaan kuwa ajnabi ah.
Dhibaatooyinka bulshada kasoo wajaha dhallinyarta waxaa kamid ah in qofkasta oo kuyaqaan ama wajigaaga garanayaba uu kuweydiiyo su’aasha ah “Shaqo-Maheshay?”, waxaa aad kuugu badanaya su’aahaan waliba qof waliba waxaa lagu gaarsiinayaa in qofkastaa ee kuweydiiyo aad u xanaaqeyso amaba aad nacdid.
Maxaa Kuu Talo Ah?
Mawaxaad leedhay Dalkaan majoogi karo? Shaqo la’aan ayaa igu dishay? Maalinwaliba su’aalo aan jawaab uheynin baa la’iweydiinayaa? War haddii aan 6sano oo kale aan siijoogane cidna shaqo ima siineyso? Waan Tahriibayaa? Waa jawaabaha dhalinyarada ey kabixiyaan caqabadaha kadhasha shaqo la’aantaa, qofki waxaa ku dhacaya niyad jab aad uweyn, waxa uu halis ugu jiraa quus.
Calaamadaha Aad Ku Arki Karto In Qofka Uu Aad U Niyad Jabay Ama Uuba Kaquustay Wixi Uu Soo Bartay Waxaa Kamid Ah:
Qofki in uu kahadlo wax-weliba oo ey dadku kahadlaan, tusaale haddii maantay baraha bulshada lagu ceynaayo qof magac leh waxa aad arkaysaa asagii oo kadhax muuqda, waliba ugu cad-cad afkiisana ey kasoobaxayaan waxyaabo loobaahnaa in uu kaxishoodo Aqoonyahan walib.
Qofki oo kudhaqmaayo dhaqan aan looga baran, waagiisii waxbarashada aad ayuu uwax baran jiray lagumana aqoon in uu banaanada iska istaago asaga oo aan waxba qabaneyn laakiin hadda waxa uu dhaxfadhiistaa dhallinyaradii aan waxba baran ee darbiyada fadhisay, iyaga ayuuna ku caqli noqday.
Waxa aad ku arkeysaa sawiro aan looga baran anshax ahaan ama aan kuhabooneyn in uu soo dhigo baraha bulshada ey ku-kulanto.
Waxaa guud ahaan istaagayo qofka in uu cilmi raadsado, waxa aadba ku diimeysaa asaga/iyada oo buug wadato.
Waxa kale ee ugu daran waa qofkii oo muuqaal kasoo dhaxmuuqda asaga oo hees madaxa laluxaaya ama tusaaleynaaya qofki heeskaas qaaday ookale.
Aqristow Su’aasha Aan Kuweydiinaayo Ayaa Ah Yaa’aaminaaya Oo Kadhiganaaya Mas’uul Qof Dhaqankaas Leh?
Caqabadaha Waa Wax Jira Laakiin Caqabadaha Kahor Raadso Waddo Aaad Naftaada Ku Bad-Baadiso:
Kuxirnaaw Alle SW, waxaa kaayaraanaya wel-welka waxa aadna niyad uyeelaneysaa rajada wanaagsan ee uu sabarku kahorreeyo.
Dadaal,dadaalku ma’ahan in aad shaqo uun raadisaa laakiin dadaalka saxda ah waa in aad xirfad cusub aad yeelataa si aad dadka kale aad kaga gadisnaato shaqadooda.
Marnaba qof wacyi iyo aqoon ahaan kaa hooseeya yuusan kusaameyn ee adiga saameey una sheeg in uu wanaaga ku soo biro, kana soo guuro dhaqamada xun-xun ee uu leeyahay qofkaas.
Isku day in aad wax cusub soo saarto, waan ogahay maskaxdaada waxa ey kulleedahay sidee, laakiin jooji su’aalaha ee billaaw waxa aad niyadda kuheyso iyaga ayaa isfu-furi doona waxa aadna arki doontaa adoo guulo kagaaray billowgaadii.
Dulqaad yeelo, waa in aad dulqaad uyeelataa hadal waliba ee kaaga yimaada dadka kugu hareereysan, waa in aad dulqaad uyeelataa caqabadaha adag ee aad kudhax jirto, waa in aad noqotaa sugaha guusha.
Yeelo saaxiib wanaagsan, intabadan waxa qofka halleynkara ama wanaajin kara waa saaxiibka, xaqiiqdii macno noomalahan qofka aan saaxiibka lanahay laakiin waxa aan hubaa haddii aadan iska badalin saaxiibkaada xun waxa uu kuu horseedi doonaa niyad jab, waxa uuna kunac siin doonaa nolosha. Halka saaxiibka wanaagsan caqliga iyo kartida badan uu kuu hogaaminaayo aaqiro iyo adduunyaba wadada saxan. Sida uu Nabigeenna innoo sheegayba.
Wax cusub baro, wax cusub baro, Haa baro wax cusub waa miraha guushaada in aad wax cusub barataa.
Guulo wacan Ayaan idiin rajeynayaa dhammaantiinba dhalinyarooy.
Tags: Talooyin Ku Socda Ardayda Dhammeysay Jaamacadaha?
Next post Hodan Naaleeye Waxay Ahayd ‘Halyeeyad Soomaaliyeed’
Previous post Buugga SHIICADA Caqiidadeeda iyo Sooyaalkeedii Geeska Afrika